Gufgaf|Online ’एलजी सिने सर्कल अवार्ड’मा किन यस्तो लापर्बाही ?
’एलजी सिने सर्कल अवार्ड’मा किन यस्तो लापर्बाही ?
गफगाफ -चलचित्र क्षेत्रमा जस्ले राम्रो काम गर्यो उस्लाई सम्मान स्वरुप उत्कृष्ट ठहर गरिन्छ र अर्वाड प्रदान गरिन्छ । र हुनु पर्ने पनि त्यहि हो । पछिल्लो समयमा चलचित्र क्षेत्रमा धेरै नै अवार्ड कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ, तर पछिल्लो समय भएका अर्वाड कार्यक्रमहरु पैशा कमाउनकै निम्ति भएका हुन भन्न लायक हुन थालेका छन् । हिजो मात्र तामझामका साथ तेस्रो ’एलजी सिने सर्कल अवार्ड’ आयोजना भयो । वलिउड स्टार गोविन्दा समेतको सहभागितामा आयोजना भएको उक्त अर्वाड कार्यक्रममा राम्रा चलचित्र भन्दा पनि हाम्रा चलचित्रहरुले अर्वाड प्राप्त गरेको स्पष्टै देखिएको छ ।
कार्यक्रममा नाजिर हुसेनलाई उत्कृष्ट नायकको अर्वाड प्रदान गरियो । त्यो पनि चलचित्र ’तिमीसँग’ बाट । जबकी चलचित्र ’तिमीसँग’का मुख्य नायक भने आकाश श्रेष्ठ हुन् । ’तिमीसँग’मा नाजिर सह नायकको भुमिकामा छन् । तर, ’एलजी सिने सर्कल अवार्ड’ मा नाजिरले उत्कृष्ट अभिनेता (हिरो) को अवार्ड हात पारे । पपुलर अवार्ड अभिनेता प्रदीप खड्काले पाए त्यसपछि धेरैले सोचका थिए उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड चलचित्र ’मंगलम’ बाट अभिनेता पुष्पल खड्का लाइ दिइन्छ , तर त्यो हुन सकेन उनलाई क्रिटिक्स अवार्डमा चित्त बुझाइयो ।
अझ मुख्य कुरा त के छ भने अर्वाड कार्यक्रमा चलचित्र ’तिमीसँग’लाई उत्कृष्ट चलचित्र घोषित गरियो । तर शिशिर राणा निर्देशित चलचित्र ’तिमीसँग’ बक्स अफिसमा नराम्ररी पछारिएको चलचित्र हो । न त यसले सुखद व्यापार गरको थियो, न त दर्शकहरुबाट यो चलचित्र लाई राम्रो टिप्पणी नै प्राप्त भएको थियो । तर एल जी अर्वाडको आयोजकको नजरमा ’तिमीसँग’ उत्कृष्ठ ठहरियो । जबकी ‘छक्का पन्जा २, शत्रुगते, मंगलम’ पञ्चायत, लिलिबिली, भूँइमान्छे लगायतका चलचित्रहरु त्यस वर्षको सफल व्यापार गर्ने चलचित्रहरु हुन् । कुन आधारमा चलचित्र ’तिमीसँग’लाई उत्कृष्ट ठहर गरियो यसको उत्तर अर्वाड प्रदान गर्ने आयोजकलाई नै थाहा होला ।
प्रदिप खड्का, नाजिर हुसेन र पुष्पल खड्का उत्कृष्ट नायकको विधामा नोमिनेशनमा परेका थिए । प्रदिपलाई ‘पपुलर नायक’, पुष्पललाई ‘क्रिटिक्स अवार्ड’ दिएर नाजिरलाई ‘उत्कृष्ट अवार्ड’ दिइयो । अझै मुख्य कुरा त के छ भने उत्कृष्ट नायकको विधामा ७ जना नोमिनेशनमा परेका थिए, तर उत्कृष्ट नायिकाको विधामा भने ५ जना मात्र नोमिनेशनमा परेका थिए ।
कार्यक्रममा नायक रमेश उप्रेती र नायिका दीपिका प्रसाइलाई उत्कृष्ट जोडीको रुपमा घोषित गरियो । हुन सक्छ रमेश र दीपिकाको जोडि उत्कृष्ट थियो, तर आयोजकको गल्ती काहा नेर देखिन्छ भने त्यो अर्वाड दिनका निम्ति नायक निखिल उप्रेतीलाई स्टेजमा बोलाइयो, जबकी उत्कृष्ट जोडिका रुपमा निखिल अफै पनि मनोनयनमा परेका थिए । यदि निखिलले खोलेको खाममा निखिलको आफ्नै नाम आएको भए के निखिल आफुले आफैलाई अर्वाड दिन्थे ? त्यस शिर्षकमा कस्ले अर्वाड प्राप्त गर्दै छ भन्ने कुरा आयोजकले पहिले नै प्लानिङ गरेको स्पष्ट देखिएको छ । हैन भने सोहि शिर्षकमा मनोनयनमा परेका निखिललाई अर्वाड प्रदान गर्न किन बोलाइयो ?
सायद जे गरे पनि हाम्रै हो भन्ने भावना भएर होला अर्वाडमा उपस्थित सबैलाई कुनै न कुनै शिर्षकमा भाग पुर्याइएको थियो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्यारो गर्ने प्रबृत्तीका काारण नेपाली चलचित्रमा प्राप्त हुने यस्ता अर्वाड कार्यक्रम प्रतिको मोह घट्दै गएको छ । कार्यक्रमलाई भव्य देखाउनकै निम्ति विदेशी पाहुनालाई निम्त्याएर अन्त्यमा आफै आलोचित हुने कार्यको अन्त्य हुन आवस्यक छ । हैन भने वर्ष दिनमा जति नै अर्वाड कार्यक्रम गरिए पनि त्यसको कुनै औचित्व रहदैन ।